आज NMC मा के के भो NMC १८ औं ब्याचको शब्दमा - LiveMandu
आज पनि र्‍याली गर्ने कार्यक्रम थियो तर धेरै कारणले भएन । म सम्पुर्ण कुरा भन्ने छु;
1. आज security gaurd अर्कै थिए, तिनीहरु संग लाठी र अरु हतियार भएको कुरा सुनियो। अरु दिन सरह management को नजीकका मानिसहरु पनि थिए त्यस्को केइ डर थिएन तर आज प्रहरी ले आफ्नो पक्षमा मिलाई सकेका थिए ।
2. आज मिलन सर आउने कुर थियोे । तर हामीलाई नभेटि बिहनै Bassrudhin ansari को घरमा गएर कुरा गर्नु भो जसले हाम्रो बिस्वस घट्यो । “तिमीहरु गेटबाट र्‍याली गरेर आउ, घन्टाघरमा हामी सम्बोधन गर्दिनेछौ । हामी गेट बहिर गए गोली हन्दिछु भनेको छ रे ।” यो कुरामा सहमत हुनसकेनम र उहाँहरु फर्केर जानूभो । बिरगञ्ज बाहिर कुनै आन्दोलन भयो भने सहयोग गर्नुहोला ।
3. ‘We respect our seniors’
आज seniors ले आन्दोलनमा सहभागी हुन दिनुभएन। “तिमीहरू आज फेरि आन्दोलन मा गयौ भने तिमीहरु हाम्रो against हुनेछौ र तिमीहरूको कारण कलेजले हाम्रो exam बिग्रियो भने रूम-रूम घुसेर पिट्छु ।” हामी के भन्न चहन्छम कि हाम्रो कारण हजुरहरुलाई केही समस्या हुनेछैन । MD ले 90% seniors लाई आफ्नो वसमा गरिसकेकाछन । We understand this.
4. र आज MD ले हामीसङ कुरा गर्यो। “अब हाम्रो बेइज्जती पूरा भो अब केहि नगर्देउ। TU ले समायोजनको पत्र पठाको छ त्यही अनुसार मिलाउँछु । अरु कलेजले पैसा फिर्ता नगरेसम्म म एक अध्यक्षको नाता ले कसरी धोका दिन सक्छु? ”
सर हामीले हजुरको बहुरुपी बानी थाहा छ, अब हजुरको कुरामा अब उड्नेछैनौ ।
5. हामीले आज तिहार पनि मनाएका छैनौ, राती जे हुन्छ फेरि हेरौंला । गुन्डाहरु टन्नै छन, हामी असुरक्षित छौ तर हामीलाई केहि लागेको छैन । Mental torture बाहेक ।
र अन्त्यमा हामी कलेज मा कुनै आन्दोलन गर्ने छैनौं तर यसलाइ हामी आझ सस्क्त बनाउनेछौ ।
– NMC 18th batch